Wararka - Ganacsatada birta iyo dadka ka faalooda arrimaha warshadaha ayaa saadaalinaya in suuqa birta uu sare u kici doono mustaqbalka dhow
Maalinta Qaranka ka dib dalabka birtu waa mid xoogan, suuqa birta ayaa la filayaa inuu sare u kaco mustaqbalka dhow.
Sida laga soo xigtay ganacsatada birta ah iyo kuwa gudaha ka shaqeeya. Baarka hadda jira, gariiradda duuban ee kulul. Gariiradda qabow ee duudduuban iyo saxan dhexdhexaad ah iyo noocyo kale oo gaar ah oo isbeddello kala duwan wata.
Marka la eego qalabka baararka, inta lagu jiro Maalinta Qaranka, baahida loo qabo gobolka Beijing-Tianjin-Hebei way yaraatay, maalinta Qaranka ka dib, dalabku wuxuu bilaabay inuu kordho. Wareeg maalinle ah ayaa si tartiib tartiib ah u kordhay, gaar ahaan 25 mm dalabkii rebar ayaa si weyn kor ugu kacay. Oktoobar 16, Suuqa Bejing ee soo saarista birta Chenggang oo ah 25 mm xannibista qiimaha rebar ee 3700 yuan / tan. Marka la barbardhigo Oktoobar 9 ilaa 40 yuan / tan, ganacsatada birta ah iyo kuwa ku xeel dheer warshadaha waxay aaminsan yihiin, iyadoo la tixgelinayo qiimaha shidaalka ceyriinka iyo qiimaha mustaqbalka, xaddidaadaha deegaanka ee xilliga dayrta iyo arrimaha adkeynta jiilaalka, waxaa la filayaa in qiimaha guud ee suuqa birta dhismaha ee Beijing. dabayaaqada Oktoobar si joogto ah ayey u kici doontaa.
Gariiradda duudduuban ee kulul, koonfurta qaybinta birta iyo gudaha warshadaha ayaa la helay baaritaanka ka dib, sababtoo ah baahida gawaarida culus ee hadda jirta ayaa si aad ah kor ugu kacday. Qodista. Gawaarida qashin-qubka iyo mashiinnada kale ee dhismaha ayaa loo baahan yahay, kororka dareenka hadda jira ee suuqa kala iibsiga. Iibinta gawaarida waaweyn ee Shiinaha ayaa gaartay 136,000 oo cutub bishii Sebtembar, taasoo kor uga kacday boqolkiiba 63 sanadkii marka la eego sanadka, xogta ayaa muujisay. Tirakoob ka soo baxay Ururka Warshadaha Mashiinka Dhismaha ee Shiinaha ayaa muujiyay in bishii Sebtember 25-ka shirkadood ee ka qayb qaatay sahaminta ay iibiyeen 26,034 makiinado macdan-qodis ah, taas oo kor u kacday boqolkiiba 64.8 sanadkii. Sida ku xusan saadaashaan, sicirka suuqyada isku dhafan ee dhowaan la duudduubi doono ayaa xoogaa xoogsan doona xaalada socodsiinta.
Marka la eego saxanka gariiradda-qabow, ilaa Maalintii Qaranka, soo-saarista iyo iibinta gawaarida iyo warshadaha qalabka guryaha ee Shiinaha way soo korayeen. Maalinta Qaranka kadib, shirkadaha hoose waxay guud ahaan leeyihiin dalab buuxin ah, kaas oo dhiirrigeliya kororka baahida birta. Tirakoobyada ay soo saareen Ururka Shiinaha ee Soosaarayaasha Baabuurta waxay muujinayaan in suuqa baabuurta rakaabka uu gaaray 1.91 milyan oo cutub bishii Sebtember, iyadoo kororka sanad-sannadeedka uu yahay 7.3%, iyadoo la ilaalinayo heerka kobaca sannad-sannadeedka oo ku dhow 8% saddex bilood oo xiriir ah. (7.7% sannad-sannadeedka bisha Luulyo iyo 8.9% sannad-sannad-bisha Ogosto). Waxqabadka guud ee dalabka hoose ayaa ka wanaagsan, qiimaha badeecadaha qabowna si adag ayaa loo taageeraa.
Taarikada qaro weyn, Maalinta Qaranka ka dib Beijing, Tianjin iyo gobolka Hebei ee qiimaha saxanka qaro weyn ee qiimaha naxdinta leh, waxaa la filayaa in isbeddelkani uu sii socon doono mustaqbalka dhow.
Ganacsatada birta ah iyo kuwa ku xeel dheer warshadaha ayaa rumeysan in suuqa birta hadda jira uu wanaagsan yahay, arrimo xuna ay is dhexgalaan. Dhinaca wanaagsan, bishii Sebtembar, wadarta maalgashiga mashaariicda waaweyn ee waddanka oo dhan waxay kordheen 96.6% bil-bil-bil ah, ka dib markii wareegga birta ee Maalinta Qaranka si weyn u kordhay, isagoo taageeraya qiimaha kaalinta adag. Maaddaama dalabka hoose uu sii kordhayo. Qiimaha birta ee dambe ayaa wali haysta meel ay ku koraan. Marka laga eego aragtida xambaarsan, Maalinta Qaranka ka dib kala duwanaanta kobaca alaabada birta ah, cadaadiska qashin-saarka lama dhimin; Siyaasadda adkaynta ee waaxda dhismaha; Waxsoosaarka birta ayaa weli sarreeya; Ka dib markii la galo deyrta iyo jiilaalka, dhismaha waqooyiga ayaa wajahay waxyaabo aan fiicnayn sida fadhiidnimo, taas oo dib u soo celin doonta halista qiimaha birta muddada dambe.
Wararka Shiinaha ee Birta ah (Nuqul 7, Daabacaadda 07, Oktoobar 20, 2020)